Tutorial steampunk 11 tsy azonao adino | Famoronana an-tserasera
Tutorial steampunk 11 izay tsy azonao adino
Ny ankehitriny Steampunk Izy io dia niandoha tao amin'ny penin'ny mpanoratra toa an'i Jules Verne izay namolavola karazana asa-foronina foronina ho an'ireo taona valopolo. Nanomboka teo dia nanomboka nibahana refy hafa izay nihoatra ny literatiora tena izy. Ny tontolon'ny lamaody, zavakanto sary na haingon-trano dia niorina tamin'ny fototry ny steampunk. Ny haitao etona no vato fehizoro ary amin'ny alalàn'izany dia misy sangan'asa azo avy amin'ny siansa sy nofinofy.
Ireo firaketana dia matetika iharan'ny lisitr'ireo mpanakanto be fahitana tamin'izany fotoana izany naminany ho avy anjakan'ny vy, metaly ary fananganana mekanika. Na dia tsy manaraka fitsipika manokana na iharan'ny lalàna aza izy io, dia azo atao ny mamoaka endri-javatra mamaritra. Amin'izy rehetra ireo dia matetika misy firaisana eo amin'ny tontolo lavitra roa. Azontsika atao ny milaza fa steampunk no Teboka fifandraisana ary hitako eo anelanelan'ny zava-mahatalanjona Victorian na Edwardian sy ny revolisiona moderina.
Etsy ambany aho te-hanolotra fampianarana 11 tena mahaliana izay mifantoka amin'ity hatsarana ity ary tsy misy fako. Amin'ny karazana sary toy ny steampunk, dia afaka mahazo be dia be amin'ny photomanipulation ianao, hahazoana valiny ambony kalitao izay mamela fatra melankolika, fahitana ary zaza ao am-bavanao. Ankafizo izy ireo!
Sary Steampunk ao amin'ny Photoshop
Lolo miaraka amina girara
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Photoshop » Tutorial steampunk 11 izay tsy azonao adino
Fitaratra kristaly niavaka nitarihan'i Kaylee
Kitapo Victory Retro Vector maimaim-poana